:: नेपाल आइडलबाट सागार आले आउट भएका छन्, कसले कति भाेट पाए ?
नेपाल आइडलबाट सागार आले आउट भएका छन्, कसले कति भाेट पाए ?
सबै प्रकारका गीत गाउन र सुन्न मन पराउने उनलाई नारायणगोपाल गुरुवाचार्य, भक्तराज आचार्य, ज्ञानु राणा, तारा थापा र एड्रियन प्रधान मनपर्ने गायकगायिका हुन्। नेपाल आइडलमा उत्कृष्ट चारसम्मको यात्रा तय गर्न सफल उनी उत्कृष्ट तीनमा परेकामध्ये बुद्ध लामाको स्वर मन पराउँछन्। यहाँसम्म आइपुग्नुलाई उनले ठुलो उपलब्धि ठानेका छन्। ‘मेहनत, नयाँ शैलीको स्वर र श्रोता दर्शक एवं परिवारको माया, साथ र आशीर्वादले यहाँसम्म आउन सकेँ’, उनले भने। नेपाल आइडलमा यहाँसम्मको यात्राले आफ्नो सांगीतिक यात्रा अगाडि बढाउन सजिलो हुने उनले विश्वास लिएका छन्। एसएमएस र अनलाइनबाट प्राप्त भोटमध्ये बुद्ध लामाले सार्वाधिक ११ लाख ४५ हजार ५३८ मत, प्रताप दासले ८ लाख ९३ हजार ३ सय ४७ मत, निशान भटराईले ८ लाख ७१ हजार ४ सय ८० मत र सागर आलेले ८ लाख ९ हजार ९ सय १५ भोट पाएका थिए । आज कम मत पाउने सागर आउट भए ।